Sanbaloolshe oo Bilaabay inuu Faafiyo Muuqaalada Qarixii Soobe ee Baaritaanadda loo isticmaalayay. – Hornafrik Media Network
Waxaa markii ugu horaysay Baraha Bulshadda lagu faafiyay Muuqaalka Gaarigii Xasuuqa ka gaystay 14-kii October Soobe, kaasoo intii uusan qarxin ay duubtay Camere CCTV.
HornAfrik ayaa ogaatay in Muuqaalkan uu ka mid ahaa Muuqaalo ay duubeen Kaamirooyin ku xirnaa Goobo Ganacsi oo ka ag dhawaa Soobe, kuwaasoo ay soo qaateen Sirdoonka Soomaaliya, si raad raac loogu sameeyo wixii dhacay, Waxaana Muuqaaladan laga helay Xogo ay ka mid tahay Nooca uu ahaa Gaariga Qarxay, taasoo sahashay in la ogaado cidda lahayd Gaarigaan.
Sanbaloolshe oo intii aan laga qaadin Taliyaha Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed loo keenay Xogahan oo dhan iyo Muuqaaladda la helay ayaa markii laga qaaday Xilka NISA, waxa uu billaabay inuu faafiyo Xogihii Baaritaanadda loo isticmaalayay, taasoo dhabar jab ku ah Guddigii ku howlanaa Howsha baarista Qarixii Soobe.
HornAfrik waxay dabagal ku samaysay halka ugu horaysay ee laga helay Muuqaaladan, waxayna ogaatay in cidda ugu horaysay ee Muuqaalkan qaybisay ay ahayd Sanbaloolshe iyo Saadaq Joon oo illaa hadda ku magacaaban Taliyaha Nabadsugidda Gobalka Banaadir, Waxayna uga gol leeyihiin faafinta Xogahan in gadaashood aan Natiijo fiican laga gaarin Baaritaanadda socda.
Sidoo kale Sanbaloolshe iyo Saadaq Joon waxay u sheegeen Dad ka ag dhaw inay hayaan Xogo intaas ka badan oo ay iyagana doonayaan inay faafiyaan, si ay ugu yaraan u fashilayaan Howlaha Dowladda Somalia oo hadda qorshaynaysa Dagaal ka dhan ah Argagixisadda Alshabaab.